बिहे को सँग गर्ने ? – Durbin Nepal News
बिहे को सँग गर्ने ?
साउन २३, २०७७ ३:३२ मा प्रकाशित
न्युयोर्कका मेयर बिल डे ब्लाजियोले गत महिना ब्ल्याक लाईफ म्याटरको आन्दोलनमा श्रीमती र छोराछोरीका साथ उपस्थित भै समर्थन जनाएको समाचार टेलिभिजनमा हेरेपछि मलाई उनको बैवाहिक र पारिवारिक जिवनको बारेमा जिज्ञासा उठ्यो । यत्रो न्युयोर्क जस्तो बिशाल शहरका नौ मिलियन मानिसहरुलाई २४ सै घण्टा मानवीय सेवा सुबिधा उपलब्ध गराएर चलाउने व्यक्तिको पारिवारिक जिवनको बारेमा थप जान्न मन लागेपछि पुराना न्युयोर्क बासीहरुसँग चासो राखें । न्युयोर्कको मानहाटनमा जन्मेका ६ फुट ५ इन्च अग्ला ५९ बर्षे मेयर ब्लाजिओकी श्रीमती चिरलेन मक्रे हुन उनी ६५ बर्षकी हुन् । उनी ५ फुट ३ इन्च अग्ली छिन् । एक त उनी अफ्रिकन अमेरिकन हुन् भने अर्काे मेयर ब्लाजियो भन्दा ६ बर्षले जेठीपनि छिन । मेयर ब्लाजियो भन्दा १ फिट २ ईन्च होची उनलाई आफ्नो श्रीमानले अँगालो हाल्दा निहुरिनु पर्छ भने उनले आधा शरिरमामात्रै ढाकेको देखिन्छ । हामी दर्शकहरुले झट्ट हेर्दा यो जोडीको अँगालो एकदमै न्यानो र गहिरो माया प्रितीले भरिपुर्ण जस्तो देखिएपनि न्युयोर्कबासीहरुले असाध्यै धेरै खोट लगाउदा रहेछन् । कसैले यो अफ्रिकन अमेरिकनहरुको भोट तान्न यस्तो पोलिटिकल विवाह रचिएको हो भने, कतिपयले ब्लाजिओ त नाम मात्रैका हुन, न्युयोर्कको मेयर चलाउने त उनकी श्रीमती नै हुन भने त कतिपयले यस्तै अलिक नमिल्दा र नसुहाउदा खाल्का टिक्का टिप्पणीहरु गरे । भित्री कुरा के हो कस्लाई थाहा र ? बाहिर स्टेजमा body language, हाउभाउ, हेराई हेर्दा एक अर्कामा चुम्बकीय आकर्षणले भरिएका अति मिलनसार र एक अर्काप्रति समर्पित जस्तो देखिन्छन् । अरुले उमेर, उचाई, रंग नमिलेको भनेपनि उनीहरुले बैवाहिक जिवन बिताएको लगभग तीन दशक हुनै लागिसकेको रहेछ र एक छोरा र छोरी समेत छन् ।
ब्लाजियोसंग श्रीमती मक्रे सन् १९९४ मा न्युयोर्क सिटी हलमा भेट हुँदा पुर्व मेयर डेभिडको speech writer थिइन भने ब्लाजियो मेयरको कम्युनिटी अफियर्स सम्बन्धी सहयोगी थिए । उनीहरुको भेटघाट हुँदासम्म उनी लेजबियन थिईन र धेरै महिलाहरुसँग लामो सम्बन्धहरु राखिसकेकी थिइन । उनले १९७९ मा भ्कEssence भन्ने magazine मा“I amaLesbian” भन्ने शिर्षकमा लेख समेत लेखेकी थिईन् । उनी लेखक, संपादक, कवि पनि हुन् । उनले १९७९ मा लेखेको आर्टिकलको स्क्यान कपीको लिंक यहां छ ।
&quot;I amaLesbian&quot; by, Chirlane McCray — Essence Magazine (September 1979)
न्युयोर्कका मेयर त एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । संसारमा राजनीतिपछि सायद सबैभन्दा मान्छेहरुले बढी टिक्का टिप्पणी वा गफ गरिने बिषय भनेको कस्ले कोसँग बिहे गर्याे अथवा अर्काको जोडीको बिषयलाई लिएरै हो । मानिसहरुले अगाडी कति राम्रो मिलेको जोडी भनेर प्रशंसा गरेपनि पछाडि सयौ खोट निकालेर टिक्का टिप्पणी गरिरहेकै हुन्छन । बाहिरबाट हेरेर झट्ट निकाल्ने खोट भनेको उचाई, रंग, उमेर नै हुन् । अरु कुराहरु त संगतबाट थाहा पाईने भएकोले तुरुन्त कमेण्ट गर्न गाह्रै हुन्छ । पहिला सोसियल मिडिया नआउन्जेल त गाउंघर ईष्टमित्र वा देखभेट भएका मानिसहरुको मात्रै टिक्का टिप्पणी हुन्थ्यो । अचेल सोसियल मीडियामा प्रायः सबैका जोडीहरु देख्न पाईन्छ । फेसबुकमा दैनिक २५० मिलियन जोडीहरुले लाईक र कमेण्ट पाउने आशामा आफ्नो जोडीसँगको फोटो अपलोड गर्ने गरेका छन् । लेजबिन जोडीका मात्रै दैनीक २०० बढी फोटो पोष्ट हुन्छन । झनै बैवाहिक बर्ष गाँठको शुभकामना साटासाट गर्ने दिन त कहिल्यै बोलचाल नगर्ने र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जोडीहरुले पनि सोसियल मीडियामा राम्रा फोटा र शब्दहरु खÞर्चेर एक अर्कालाई तारिफÞ गरेर पोष्ट गरिरहेका हुन्छन् ।
आखिर जोडी किन बाँधिन्छन्, कहिले, कसरी र कहाँ भन्ने कुरा मेरो चासोको बिषय भएन । तर को सँग भन्ने कुराचाहि असाध्यै महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । विवाह भएको बेलामा नयाँ दुलाहा दुलहीहरु प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको जस्तो देखिएपनि समय बित्दै जाँदा मनमुटाव बढेर दुःखी हुने गर्छन । धेरै जसो जोडीहरुले बिवाह एउटा सम्बन्धको रुपमा मात्र लिने गर्छन् भने दम्पतिहरु एक–आपसमा कुराकानी नै गर्दैनन् । उनीहरु बिचमा विश्वास, एक–अर्काप्रतिको सम्मान, माया, प्रेम जागृत नै नभएर जÞबरजस्ती सम्बन्धहरुलाई अगाडी बढाईरहेका हुन्छन् । यसरी भावनात्मक तालमेल नभएपछि वैवाहिक जिवन दिक्क लाग्दो र निराशापूर्ण हुन्छ । अमेरिकामा झण्डै ६२ प्रतिशत मानिसहरु बिवाहित छन् भने जसमध्ये २६ प्रतिशत मात्रै आफ्नो बैवाहिक जिवनबाट पूर्णरुपमा खुशी रहेको बताएका छन् । कतिपय कानुनी अधिकारको फाईदा उठाउनका लागी बिवाह गर्छन भने कतिपय आर्थिक स्थिरताको लागी त कति भाडा तिर्न नसकेको कारणले गर्छन । कतिपय बच्चा जन्माउनका लागि विवाह गर्छन् त कतिपय एक्लो भएर कम्पनिको लागी गर्ने गर्छन । कारण जे भएपनि अमेरिकामा मानिसहरु फेरि अर्काे बिवाह र डिभोर्सको बारेमा दिमागको एउटा कुनामा सोचि नै रहेका हुन्छन् । हुनपनि यहाँ कोहि सुन्दरताको पछि लागिरहेका हुन्छन् त कोहि पावर र पैसामा आफ्नो ईज्जत खोजिरहेका हुन्छन् । धनि र घरानीयाँहरु गरिबसँग नाता जोड्न चाहँदैनन । छाला राम्रो हुनेहरु नराम्रासँग नाता जोड्दैनन ।
अमेरिका जहाँ महिला र पुरुषको अधिकार बराबरी नै छ र महिलाको हकमा कानुनहरु बलिया छन् । यहाँ आफै कमाउने खाने, बाँच्ने र रमाउने वातावरण हुँदा पनि धेरैजसोले जÞबरजस्ती विवाहको संझौता गरिरहेका हुँदा रहेछन् ।
टेक्सस विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान विषयका प्राध्यापक David M. Bus को Why Women Have Sex भन्ने किताबमा लेखे अनुसार ८४ प्रतिशत महिलाले आफ्नो वैवाहिक जिवनलाई टिकाउन र घरपरिवारमा शान्ति कायम राख्नका लागि श्रीमानसँग सम्भोग गर्ने गरेको बताएका थिए भने कतिपयले पुरुषप्रति दया जागेर आएका कारण सम्भोगमा सहभागी भैदिएको कुरा बताएका थिए । केहिले भने पुरुषबाट आर्थिक वा कुनै लाभ लिएबापत चुक्ता गर्न बदलामा खुशी पार्नका लागी सम्भोग गरेको बताएका थिए ।
अभिव्यक्ति गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा बेग्लै हो । यदि सम्बन्धहरु सबै लेनदेन र करकापमै चलिरहेकाछन् भने खै कहाँ छ त प्रेम, आनन्द, इच्छा र चाहाना ? विवाहको मान्यता र महत्व हरेक ब्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुन्छ । हामिकहाँ कसैसँग प्रेम गरेपछि विवाह नै गर्नु पर्छ भन्नेमान्यता छ तर अमेरिकी समाजमा विवाह गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन । किनकी यहाँ सात प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरु लिभइन रिलेसनमा छन् ।
पूर्वीय हिन्दु दर्शनमा विवाहलाई १६ वटा संस्कारमध्ये एक महत्वपूर्ण संस्कार मानिएको छ । निश्चित उमेर पुगेपछि परिवारका सबै सदस्यहरु लागेर विवाह सम्पन्न गराउँछन । पहिला पहिला चिना टिप्पन हेराएर शुक्र, चन्द्रमा र बृहस्पति ग्रहहरु उचो र निचो मिलेपछि बिवाह गराईदिने चलन थियो । तर अहिले मानिसहरु स्कुल, कलेज वा बिभिन्न पेशा ब्यवसायका लागि लामो समय घर बाहिर रहने भएकोले उतै भेटिएका मध्ये कोहि एकजनासँग बिहे गर्छ्न । सोसियल मीडियाबाट पनि धेरैले आफ्नो जोडी छान्ने गर्छन । पछिल्लो समय ब्यवसायिक रुपमा संसारभर सयौं म्याच मेकिंग कम्पनीहरु खुलेका छन । निबेदन दिएका सम्भावित मिल्ने जोडीहरुसँग वर्कशप गराएर मनोबिज्ञान र पृष्ठभूमि पत्ता लगाई कस्को जोडी कोसँग मिल्छ भनेर बताई दिन्छन र त्यसपछि सम्बाद अगाडी बढाउने चाँजोपाँजो मिलाईदिन्छन् । जति बढी जनसँख्या भएको शहर छ उति नै बढी म्याच मेकिंग कम्पनि र डेटिंग साईटहरु पनि फस्टाउंदै गएका छन् ।
केहि मानिसहरु त सम्बन्धमा खुशी नै भएर बसेका हुन्छन् । एक त मानिसहरु आफुले के खोजेको हो भन्ने कुरामा प्रष्टनै हुँदैनन् भने ठ्याक्कै आफुले खोजे जस्तो सर्वगुण सम्पन्न ब्यक्ति पाउन पनि पाउदैनन् । यस्तै किचलो र बेमेल मै जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ । जिन्दगी जिउने भन्दापनि कटाउने तर्फ लाग्छन । किनकी आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक जस्ता बिभिन्न कारणहरुले जोडेको सम्बन्ध तोड्न त्यति सजिलो पनि छैन ।
बैवाहिक जिवन कसरी खुशी राख्ने भन्ने बिषयमा त धेरैले सल्लाह सुझाव देलान । तर त्यो सम्झौताको कुरा हो । यो सम्झौतामा पुग्नु अगाडी नै एकले अर्काे राम्रोसँग जान्न र बुझ्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला त आफुले के चाहेको हो भन्ने प्रष्ट हुन जरुरी छ । आफ्नो सम्भावित उम्मेदवारको ईच्छाहरु के के हन ? मन पर्ने र नपर्ने कुराहरु के के हुन् ? कत्तिको विश्वासीलो र भरपर्दाे बानी ब्यवहार छ ? आफ्नो र सम्भावित उम्मेदवारको ईच्छाहरु कति समान र मिल्दाजुल्दा छन ? अरु मानिसहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? यो सबै कुरा पहिले नै थाहा पाएर अगाडी बढ्यो भने सायद सम्बन्ध आदर्श होला । नत्र एउटा सम्बन्धले जिन्दगी निरस र फिका हुन जान्छ ।
लेखक अमेरिकाको न्युयोर्कमा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि देखियो, एक विदेशी र एक नेपालीमा ओमिक्रोन पुष्टि
पाटन उच्च अदालतबाट अध्यक्ष पन्तको पक्षमा निर्णय
नेपाल सरकार विरुद्ध एनआरएनएद्वारा दायर मुद्दा फिर्ता लिन माग
भोली बर्कलीमा रविन शर्माले गाउने